जीवनको १० बर्षको साथ, Pinterest २ 10० मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ताहरूमा पुग्छ क्रिएटिव अनलाइन
Pinterest खोजीको परिणाममा गुगलमा सम्बन्धित स्थानमा आक्रमणको लागि आगलागी भएको छ। तर यो छविमा फोकसको कारणले हो। यी दिन अघि घोषणा गर्‍यो कि यो २ 250० लाख प्रयोगकर्ताहरुमा पुगेको छ मासिक सम्पत्ति।
यस तरिकामा अन्य सामाजिक नेटवर्कहरूमा पुग्दछयद्यपि ट्विटरमा, किनकि इन्स्टाग्राम वा फेसबुक निकट हुनको लागि लामो समय देखिन्छ। बोर्ड र छविहरूलाई समर्पित सामाजिक नेटवर्क सबै प्रकारका प्रयोगकर्ताहरूका लागि आफ्नै प्लेटफर्म बनाउन।
फेसबुक छ २,१2.167 million मिलियन सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू प्रत्येक महिना, १. billion करोड WhatsApp मा र on०० मिलियन इन्स्टाग्राममा। हामी बुझ्न सक्दछौं किन यति विशाल संख्यामा नजीक आउन तपाईलाई केहि खर्च लाग्नेछ।
तर हामीसँग पिन्टेरेस्ट प्रयोगको बारेमा बढि डेटा छ। योसँग २ million० मिलियन मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताहरू छन् "पिन गरिएको" १ 175 अरब भन्दा बढी छविहरू। यदि हामी त्यो आंकडा गत वर्षसँग तुलना गर्छौं भने, यो 75 XNUMX% ले वृद्धि भएको छ।
यो पिनटेरेस्ट नै हो गर्व गर्नुहोस् कि%%% प्रयोगकर्ताहरू तिनीहरूले ती चित्रहरूमा फेला परेका केही विचारहरू पूरा गर्छन् जुन उनीहरूले "पिन गरे।" अन्य सामाजिक नेटवर्कमा औसत %१% को तुलनामा एक खुलासा डाटा।
एक सामाजिक नेटवर्क को रूप मा बजारमा १० बर्ष भैरहेको छ, चार बर्ष पछि फेसबुक र समग्रमा आश्चर्यजनक दरमा बढ्दै। यो स्थिर गति प्रेरणाको खोजीमा र चाखलाग्दो उत्पादनहरू खोजी गर्न सक्रिय प्रयोगकर्ताहरूको कारणले हो।
चाखलाग्दो उत्पादनहरू खोज्दै मतलब ecommerce को लागी एक ठाउँ एक साइट को नक्सा बनाउन र आफ्नो दृश्यता वृद्धि मा खोज्दै। र यो यो हो कि पिन्टेरेस्टले तपाइँलाई तपाइँको उत्पादनहरू पिन गर्न, मूल्य, उपलब्धता र उनीहरू कहाँ खरीद गर्न सकिन्छ जहाँ ट्याग गर्न अनुमति दिन्छ।
una सामाजिक नेटवर्क जुन बढ्नेछ र विकल्पहरूमा वृद्धि हुनेछ र २ month० मिलियन भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरूको लागि सुविधाहरू जुन प्रत्येक महिना सक्रिय छन्, तपाई एक हुन के पर्खदै हुनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » वेब डिजाइन » सामाजिक नेटवर्क » Pinterest मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता को लागी २ 250० मिलियन
बेट्रीज रुबियो भन्यो
म दिनको उजुरी बन्न जाँदैछु: भर्खरको परिवर्तनले तपाईको खोजलाई अन्य नेटवर्कमा मोनिटर गर्दछ, पिनको पुनरावृत्ति र फाईलहरूको क्रममा संशोधनले यसलाई थोरै उपयोगी बनाउँदैछ ...
बीट्रियाज रुबियोलाई जवाफ दिनुहोस्
अन्य नेटवर्कहरूमा तपाईंको खोजीहरू?
उबर र उबर ईट्सले नयाँ लोगो सुरूवात गर्‍यो